Tom Howard - U qorshee kulankaaga istaraatiijiyadda qareenka cannabis
Maxay Shirkaddaada Xashiishadda u Baahan Tahay Qareen wanaagsan
Maxuu ugu baahan yahay xashiishadda marijuana ama shirkadda hemp ay u baahan yihiin qareen xashiishad?
Indho labaad oo indhahaaga ah oo ku saabsan biximahaaga oo bixiya aragti caqli gal ah ayaa shirkadda ka dhigi karta mid guuleysta. Tusaale ahaan, Warren Buffett wuxuu la kulmay qareen la yiraahdo Charlie Munger sanadkii 1959 aadna wuu u jeclaaday fikradihiisa si uu ugu qanciyo inuu ka tago ku dhaqanka sharciga oo uu kula soo biiro Berkshire Hathaway. Qareenada Cannabis ee leh isla markaana ka shaqeeya meheradaha warshadaha isla markaana leh aqoon qoto dheer oo ku saabsan halista iyo isbeddelada ayaa ka caawin kara ganacsigaaga inuu helo faa'iido tartan isla markaana yareeyo halista waxqabadka.
Waxaan soo bandhigi doonaa 5 faa'iidooyin muhiim ah oo la bixiyay anagoo kireysanayna qareen ganacsigaaga xashiishadda cusub. Shirkaduhu waxay shaqaaleysiiyaan qareeno si ay uga caawiyaan ganacsigooda wax kasta oo nooc ah. Halkan waxaa ah shan ka mid ah faa'iidooyinka ugu waxtarka badan ee qareenka warshadaha cannabis uu u keeni karo kooxdaada:
Aqoonta Codsiyada Iskujira iyo Habsocodsiinta Shatiyada
Fahamka u hoggaansanaanta qawaaniinta federaalka iyo gobolka
Fahmitaanka Qandaraasyada Ganacsi ee Hawlaha
Khibraddii hore ee Warshadaha iyo Aqoonta
Maareynta halista khataraha Ganacsatada Xashiishka
Waxaan ka wada hadli doonnaa shantaas faa'iidod ee aan uga shaqaaleyneyno qareenka cannabis saxda ah ganacsigaaga.
La tasho a marijuana ama hemp qareen ku saabsan ganacsigaaga xashiishadda.
Xashiishadda si joogto ah ayey ugu koraysaa adeegsiga iyo caan ka ahaanshaha daafaha adduunka. Wixii markii hore loo tixgeliyey inay tahay tabeexad ayaa hadda helaya caan ah, aqoonsi, iyo raad ku helid gobollo badan oo Mareykanka ah iyada oo Washington, DC ay sharciyeysay beerista, haysashada, iyo isticmaalka marijuana. In kasta oo hemp uu si buuxda sharci u leeyahay ka dib markii laga saaray Xeerka Maandooriyaha La Maareeyay Bill Farm 2018.
Sida aan hadleyno, in kabadan 33 dowladood oo kuyaala Mareykanka ayaa sharciyeysan nooc nooc marijuana inay tahay xalka dhabta ah ee caafimaad ee lagu noolaan karo.
In kasta oo dadweynaha guud ay beddeleen aragtidooda ku wajahan marijuana, bilaabidda ganacsiga xashiishadda oo si guul leh ay u socoto, waa hawl aad u sarreysa iyadoo la tixgelinayo kala duwanaanshaha shuruucda gobolka iyo federaalka.
Haddii aad tahay ganacsade hami weyn leh kuna hanweyn inuu ku dhex dhuunto suuqan soo koraya, waxaa lagugula talinayaa inaad shaqaaleysiiso khabiir cannabis qareen ah. Ujeedada ugu weyn ee tan ayaa ah in la hubiyo in meheraddaadu ay u hoggaansan tahay dhammaan qawaaniinta ku habboon gobolkaaga.
Maanta, waxaan raadin doonnaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka shaqaalaysiinta qareenka cannabis markay timaado iibinta xashiishadda, ha ahaato hemp, daawo, ama xamaasad madadaalo.
1. Shuruudo isku dhafan & Kharashaad aad u sareeya si loo galo warshadaha Cannabis
Gobol kastaa wuxuu leeyahay sharciyo kaladuwan oo kusaabsan aasaasida iyo kormeerida ganacsiga marijuana. Dowlado badan ayaa sharciyo adag ka soo saaray tirada ganacsiyada xashiishadda ee la dhisi karo waqti go'an.
Natiijadu waxay tahay in gobolada qaarkood ay bixiyaan kaliya liisanka inta lagu guda jiro daaqad codsi aad u cidhiidhi ah oo kharash aad u sarreeya iyo tartan aad u adag la leh shatiyada.
Inta badan inta badan, codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan ajuurada codsi sare iyagoo ujeedadoodu tahay inay u soo saaraan faa'iidooyin muhiim ah gobollada ruqsadaha haysta.
Tusaalaha ugu fiican ayaa ah "Connecticut", kaas oo ku dallacaya $ 25,000 oo ah lacag dalabka aan la celin karin oo la siinayo murashaxiinta doonaya ruqsad u haysta ganacsigooda marijuana. Iyada oo maanka lagu hayo qarashkan sarreeya, qareenka cannabis ayaa kaa caawin doona inaad fahamto sida loola kulmo dhammaan shuruudaha sharciyeynta iyo dalabka si loo dejiyo kharashyada aadka u sarreeya ee ajuurada.
2. Qareenada Xashiishaddu Waxay Fahmaan Sharciyada Federaalka & Gobolka
Qaar ka mid ah ganacsatada xashiishadda cannabis waxay leeyihiin faham asaasi ah oo ku saabsan sharciga marijuana ee gobolkooda waxayna ku dadaalaan inay u hoggaansamaan. Si kastaba ha noqotee, hal ama laba sababood awgood, dawladda federaalku waxay wali u tixgelin kartaa ganacsigooda mid sharci darro ah oo ay ruqsad ka qaaddo ruqsaddooda
Qareen ku takhasusay cannabis ayaa kaa caawinaya inaad fahanto shuruucda federaalka iyo gobolka si aad u istaagto fursad fiican oo aad ku gaadho hanashada guulaha muddada dheer ee warshadahaan qaaliga ah.
Markaad saaran tahay qareen xashiish ayaa waxtar u leh sharci ka qaadashada bilowgaaga. Go'aaminta badeecada ama adeegyada aad jeceshahay inaad ku deeqdo waa lama huraan illaa aasaasida meheradda.
Ganacsiyada marijuana waxaa loo kala saaraa saddex qaybood oo kala duwan, koox walbana waxay muujisaa heerarka iyo qawaaniinta kala duwan.
Qareen khibrad leh ayaa kaa caawin doona inaad fahanto qaybta gaarka ah ee ay meheraddaadu marijireyso ku hoos dhacay. Noocyada ganacsi ee marijuana ee la macnaynayo waa kuwa soosocda:
(i) Beerashada - Beerashada xashiishka waxaa si aad ah u habeeya dawlado kaladuwan si loo dammaanad qaado badeecad tayo sare leh, amaan ah, iyo wax soo saar leh. Koraaya dhirta marijuana waxay u baahan tahay maalgashi la taaban karo iyo dadaal xoogan. Qareenkaaga ayaa kaa caawin doona inaad ku bilowdo meheraddan si loo hubiyo inay ku dhammaystiran tahay dhir dhaqashada.
(ii) Faleebo - Ganacsato badan ayaa si dhakhso leh u asaasaya shirkado wax ka qabta iibinta aashitada iyo ashyaa'da cannabis lagu buufiyo. Bandwagonkaan cajiibka ah waxaa dhiirigeliya daraasadaha sii kordhaya ee sayniska ee sheeganaya faa'iidooyinka qiimaha leh ee marijuana ee daaweynta. Tiro aad u tiro badan oo sharciyo ah ayaa laga diyaariyey gobollo kala duwan si loo xukumo waxyaabaha ka kooban, sumadaynta iyo tilmaamaha u habboon ee loogu talagalay waxsoosaarkan.
(iii) Tafaariiqda - Ganacsiyada marijuana ee lagu kala soocay qaybta dukaannada tafaariiqda waxaa ka mid ah qalabka madadaalada iyo dawooyinka. Caadi ahaan, ururiyaashaani waxay ka iibiyaan waxsoosaarkooda shaqsiyaadka ruqsadda leh iyo bukaannada da’doodu ka weyn tahay 21 sano. Kharashaadka lagu bilaabayo sameynta bakhaarrada tafaariiqda ayaa ah kuwa ugu qaalisan, laakiin waxay inta badan abuuraan faa'iido aad u badan marka loo eego dhammaan noocyada kale ee ganacsiga marijuana.
3. Garyaqaannada Xashiishaddu Waxay Fahmaan u hoggaansanaanta
Qareen si run ah ulahadlaya shuruucda federaalka iyo gobolka marijuana waxay kaa caawin doontaa inaad garato shuruudaha gaarka ah ee quseeya qeybta gaarka ah ganacsigaaga marijuana. Fahmitaanka shuruudaha codsiyada, ruqsad siinta iyo maalgelinta ganacsigaaga xashiishadda waa qeyb muhiim ka ah dhismaha iyo kobcinta shirkad marijuana sharci ah.
Qaar ka mid ah ganacsatada marijuana ama hemp waxay isku dayaan inay maraan farsamooyinkan oo kaliya waxay ku dhamaan karaan luminta maalgashigooda.
Nidaamka ku lugta leh codsashada ruqsadda ganacsiga iyo raadinta maalgalintu aad ayey u kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran meesha aad deggan tahay. Khidmadaha dalabka ayaa ah kuwo aan lagusoo koobi karin gobolada qaar badanaana waxay ku kacayaan kumanaan doolar iyada oo aan wax dammaanad qaad ah ah la aqbalin. Samaynta baaritaanka asalka waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan u noqoto duruufaha qaarkood si loo xakameeyo dambiyada la xukumay oo taariikhdoodu ay ka dambeyso rabshadaha ama dembiyada la xiriira daroogada.
Intaa waxaa dheer, gobollo badan ayaa leh sharciyo xaddidaya tirada meheradaha marijuana ee lagu diyaarin karo aag la cayimay. Tani waxay dhalisay khidmad la kordhiyey iyo tartan sii kordhay. Gobollada kale xitaa waxay u qaadaan talaabo dheeri ah si ay wax uga weydiiyaan ilahaaga maaliyadeed si ay u hubiyaan inaad leedahay muruq maaliyadeed oo daboola kharashyada sida kirada iyo adeegyada.
Magaalada Illinois, tusaale ahaan, gobolka waxaa laga yaabaa inuu u baahdo meheradaha marijuana ee la soo jeediyay inay lahaadaan ilaha dhaqaalaha ee aan ka yarayn nus milyan doolar si loo dejiyo loona socodsiiyo ganacsiga. Gobolku wuxuu kaloo dalban karaa in la arko tallaabooyinka amniga ballaaran ee milkiilaha ganacsigu u adeegsanayo si loo hubiyo in xashiishadda soo saarta ujeeddooyinka daweynta ay ku dhammaanayso suuqa madow - ha ahaato shil ama ula kac.
Ka sokow qawaaniinta gobolka, dowladaha hoose iyo magaalooyinku waxay lahaan karaan qaab iyaga u gaar ah oo lagu xakameeyo ganacsiga marijuana. Dawladaha hoose qaarkood waxay baaritaano asal u sameeyaan milkiilayaasha ganacsiga marijuana iyo shaqaalahooda taasoo shardi u ah dalbashada ruqsada.
Tixgalinta kharashyadan qaaliga ah, kiraysiga qareen cannabis si ay kaaga caawiso inaad ku wareejiso kuwan faahfaahinta farsamo ee aad moodo inay fikrad fiican tahay ka hor intaadan hore u dhaqaaqin. Ka gaabinta inaad raacdo shuruudaha waxay kuu horseedi kartaa ganaaxyo, kala noqosho liisanka, iyo mas'uuliyadda dambi ee ciqaab kale.
4. Ka Bixida Ganacsiga Xashiishkaaga Dhulka
Bilaabida iyo joogtaynta ganacsiga xashiishadda waxay noqon kartaa dadaal dadaal badan. Ka sokow caqabadaha caadiga ah sida socodka lacagta, suuqgeynta, xiriirka macaamiisha, iyo kobaca, ganacsiga cannabis waa inay si adag u raacdaa dhammaan shuruucda iyo qawaaniinta - ama u diyaar garoobaan caqabadaha. Iyada oo leh qareenka cannabis ee saxda ah dhinacaaga, ganacsigaaga waxaa lagu meelayn karaa aasaaska saxda ah si loo hubiyo koritaanka mustaqbalka iyo ballaarinta.
Garyaqaan xashiishad wanaagsan leh ayaa kaa caawin doona sameynta ganacsiga & ka shaqeynta cannabis, sooneynta & ogolaanshaha, iyo u hogaansanaanta shatiga maxalliga & gobolka.
Qareen la'aan, way fududahay inaad hesho naftaada adigoo ku soconaya dariiq khafiif ah adigoon ka warqabin sababta oo ah dabeecadda waligeed isbeddelaysa ee sharciyada xukuma ganacsiga marijuana. Dembiyo badan oo dambi ayaa kugu kugu dhici kara ganacsiga marijuana oo ay kujirto waqtiga xabsiga, hanjabaada xiritaanka ganacsiga, iyo ganaaxyo xad-dhaaf ah iyo ajuuro kale.
Qareenka cannabis ee saxda ah kama difaaci doono oo keliya eedeymahaan wuxuu kaloo ilaalin doonaa sumcadda ganacsigaaga. Meherad kastaa waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso meel ku xusan shuruucda si markaa shirkadu ay u sii ahaato mid shaqeyneysa. Ugudambeyn, ganacsigaagu wuxuu u qalmaa hawlgal guul leh iyada oo aan culeys dheeraad ah la saarin arrimaha sharciga.
5. Xaddidista Khatarta Marijuana ama Hemp Meheradda
Shaqaalaynta qareen cannabis ayaa ah hab fiican oo lagu yareeyo halista ganacsigaaga uu ku wajihi karo. Dhinaca kale, marijuana wali waa shay sharci darro ah sida uu dhigayo sharciga federaalka, shuruudna kama saarna dowladaha sharciyeeyey isticmaalkooda ujeedooyin caafimaad ama madadaalo. Dhanka kale, shaqsiyaadka ganacsigoodu u hogaansamo sharciyada gobolka guud ahaan ma qabaan halista qabashada ama maxkamad ee maamulka federaaliga ah.
Sidaas darteed, dhammaan milkiilayaasha ganacsiga marijuana waxaa lagula talinayaa inay si adag u raacaan qawaaniinta gobolkooda iyagoo doonaya inay xaddidaan fursadaha dacwad-ku qaadista dambiyada iyo maalgashi macquul ah. Xukuumadda federaalku waxay si joogto ah u raadsaneysaa ganacsiyada aan lagu ilaalin sharciga qaanuunka marijuana ee gobolka si loogu maxkamadeeyo.
Waxay diiradda saareysaa maxkamadeynta kuwa ku lugta leh dambiyadan sida qaybinta marijuana shabakadaha dambiyada abaabulan, wadista maandooriyaha, qeybinta marijuana carruurta, iyo howlaha kale ee la xiriira haysashada sharci darrada daroogada.
Iyadoo khabiir ku ah xashiishad cannabis uu saaran yahay, waad ku nasan kartaa in ganacsigaaga loo dejiyay qaab si weyn u yareyn kara halista xukun federaal ah.
Qareenku wuxuu awoodi doonaa inuu qaabeeyo meheraddaada si waafaqsan shuruucda gobolka oo dhan si looga fogaado kala-goynta liisanka ganacsiga iyo ganaaxyada la socda. Sidoo kale, qareenka cannabis wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ganacsigaaga ilaaliyo oo cusbooneysiyo isagoo si dhow ula soconaya shuruucda kiisaska iyo isbedelada siyaasadaha.
Meheradda marijuanaada, khalad keliya ayaa kuu horseedi kara maxkamadda federaalka oo waxay yareyn doontaa dhaqaalahaaga. Mid ka mid khaladaadka noocan ah waxaa ka mid ah shaqaaleynta shaqaalaha. Haddii aad damacsan tahay inaad shaqaaleysiiso shaqaale cusub, qareen cannabis ayaa kaa caawin doona sharciga qaan-sheegashada iyo caymiska.
Fikradaha kama dambaysta ah ee ku saabsan Qareenka Xashiishad
Meheradaha ku hawlan beeritaanka ama iibinta xashiishka waxay leeyihiin khatar aad u weyn. Sababtaas awgeed, danta kuugu jirta ayaa ah inaad ka fiirsatid inaad shaqaaleysiiso qareen cannabis ganacsigaaga.
Qareenka cannabis ma caawiyo oo kaliya inuu ka dhabeeyo halista dhaqaale ee ka imaanaysa ganacsiga marijuana laakiin wuxuu kaloo xaqiijinayaa in waraaqaha ganacsiga iyo codsiyada shati siinta ay yihiin nidaam.
Marka la eego qiimaha bilawga sare, kakanaanta qawaaniinta ku lug leh iyo halista sharciga federaaliga ah, qareenka wuxuu u eg yahay kharash macquul ah. Isku dayga inaad turjunto sharciyada xashiishadda laftaadu waxay noqon kartaa waqti lumis iyo jahwareer.
La xiriir qareenka cannabis si aad ugala hadasho waxyaabaha kuu banaan iyo sidii aad u sugi lahayd jiritaanka ganacsigaaga. Annaga ayaa leh milkiileyaasha ganacsiga adiga oo kale.